Arturo Vidal oo Wajahaya 10 Sano oo Xabsi adag ah | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Arturo Vidal oo Wajahaya 10 Sano oo Xabsi adag ah
(26-5-2018) Xiddiga Bayern Munich iyo xulka qaranka Chile ee Arturo Vidal ayaa halis ugu jira inuu ku dhaco xukun maxkamadeed oo toban sannadood oo xadhig ah, kaddib markii uu rabshad ka sameeyey goob lagu caweeyo.
Afhayeen u hadlay xafiiska xeer ilaalinta waddanka Jarmalka oo lagu magacaabo Florian Weinzierl ayaa shaaciyey in Vidal iyo walaalkii Sandriano ay bishii September ee sannadkii tegay ay rasbshad ka sameeyeen hotel ku yaalla magaalada Munich, halkaas oo ay dad dhaawacyo ugu geysteen.
Afhayeenku waxa uu sheegay in maalinta la dhegaysan doono dacwadda aan weli wakhti loo qaban, hase yeeshee, xukun ciqaabeedka ku dhici doona uu u dhaxayn doono lix bilood illaa toban sannadood.
“Waxa aanu ku eedaynay inuu laba qof waxyeelleeyey, waxaana lagu xukumayaa sharciga loo adeegsado cidda waxyeelaysa qof kale.” Sidaas ayuu yidhi.
Dhacdadan hadda xukunkeedu soo baxayo ayaa waxay dhacday 16 September, 2017, markaas oo uu Vidal tegay hotelka caanka ah ee Oktoberfest si uu ugu damaashaado guul 4-0 ahayd oo Bayern ay ka gaadhay Mainz.
Markhaatiyo joogay goobta ayaa waxay sheegeen in Vidal, walaalkii Sandriano iyo saaxiibo kale oo la socday ay si xun u sakhraameen, kaddibna ay dadka ku kaceen.
Vidal ayaa dhawr quraaradood ku tuuray dhulka, kaddibna miiskii wax lagu cabbayey fuulay oo dusha kaga istaagay, waxaana uu waxyeello u geystayy dhawr qof oo goobta joogay, waxaana falkiisa oo kale sameeyey qolyihii la socday oo rabshadda joojin waayey illaa ay ciidamada boolisku goobta soo gaadhayeen.
Hal qof ayaa dhaawac uu gaadhay markii ay quraarad khamri ahi madaxa kaga dhacday, taas ayaana ah khasaaraha ugu weyn ee binu-aadam ee hotelka laga xaqiijiyey.
October 2014, Vidal ayaa rabshad ka sameeyey hotel lagu caweeyo oo ku yaalla magaalada Turin markii uu khamri ka dhargay, marar dhawr ahna waxa uu iska xaadiriyey garoonka tababarka isagoo cabsan, taas oo uu ku mutaystay in Juventus ay ku ganaaxdo £89,000.
Sandriano ayaa isagana marar dhowr ah jeel la geeyey iyadoo markii ugu dambaysay ahayd sannadkii 2016 oo sidan oo kale uu rabshad uga sameeyey Hotel.
Tababarihii hore ee xulka qaranka Chile, haddana ah macallinka Argentina Jorge Sampaoli ayaa hore u sheegay in Vidal uu jecel yahay Khamriga isla markaana aanu naftiisa maamuli karaynin, uuna u baahan yahay dhakhtar.